Ngemuva kukaHarvey, no-Irma, manje kuza uMaria, esinye isiphepho | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Imephu yamanje yomoya
Ngemuva kokudlula okubhubhisayo kweSiphepho u-Irma, isiphepho esisha sisongela ama-Lesser Antilles, eCaribbean. ISiphepho uMaria. Umthelela wayo kulindeleke emahoreni ambalwa alandelayo, kule ndawo imiphumela kabani ka-Irma zazibuhlungu kakhulu. IMaría, obekuyisiphepho esishisayo, iqinisiwe emahoreni okugcina ukuze ifinyelele esigabeni sokuqala sesiphepho. Ngokufanayo, konke kukhombisa ukuthi ngokuhamba kwe- UMaria uzoqhubeka nokuqina, futhi futhi kunezaziso futhi ePuerto Rico.
Konke kuzoya ngokuthi kuguquka kanjani futhi uma ekugcineni "ithatha isinqumo" sokushintsha umzila wayo. Okwamanje kulindeleke ukuthi iwele isiqhingi sasePuerto Rico, nokuthi ikwenze lokho ngesigaba esiphakeme kunalesi esikhona manje. Isikhathi seziphepho asikapheli, yingakho-ke kusekhona ezintsha.
Ama-alamu esifundeni nomphumela weFujiwhara
Isiphepho uMaria, sibikezelwe kungakapheli amahora angama-72
Ngokusho kwe-US National Hurricane Centre, iSiphepho uMaria kulindeleke ukuthi sihlasele iLeeward Islands eCaribbean namhlanje ngoMsombuluko ntambama. Babuye bangeze lokho Emahoreni angama-48 alandelayo lizoqhubeka nokuba likhulu fuerte. Kunezaziso eziyisixwayiso eGuadeloupe, eDominica, eMontserrat, eSaint Kitts, eNevis naseMartinique. Ngokubheka ukuthi eziningi zalezi zindawo elibangise kuzo sezivele zishaywe yi-Irma, zenza isimo sibe nzima kakhulu. Phakathi kweziqhingi kunalezo ze-Antigua neBarbuda, lapho i-panorama yayingenalutho.
Kukhona nesinye isiphepho esisebenzayo e-Atlantic, iSiphepho uJosé. Okwamanje, akulona usongo, kepha-ke, iqiniso lokuthi kuneziphepho ezimbili ezisondele kakhulu kungadala lokho okwaziwa ngokuthi "Umphumela weFujiwhara". Ngokuya ngemodeli, ukubikezela kungahle kuholele noma kungaholeli lo mphumela. Ukuqonda ukuthi imayelana nani, iba njengokuthi uhlobo lomdanso "ongajwayelekile" phakathi kweziphepho sebesondelene ngokwanele.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ngemuva kukaHarvey, no-Irma, manje kuza uMaria, esinye isiphepho